www.camaloow.com - News: XOG: Sacuudiga oo Madaxweyne Farmaajo u soo diray Warqad uu ka shakiyey.....................
December 10 2018 12:55:09
XOG: Sacuudiga oo Madaxweyne Farmaajo u soo diray Warqad uu ka shakiyey.....................
<?php </a> Dowladaha Imaaraatka iyo Soomaaliya waxaa ka dhax aloosan Khilaaf xoogan oo salka ku haya Saldhiga imaaraadka ay dooneyso in ay ka dhisato Magaalada Dekedda leh ee Berbera ee Deegaanada Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa waxaa uu dhax dhaxaadinta labada dal uu u bandhiga Dowlada sacuudiga oo dhawaan Booqasho rasmi ah uu ku tagay isagoo arrintaas kala soo hadlay Madaxda dalka sucuudiga.
Dowlada Sacuudiga ayaa si rasmi ah warqad ugu soo jawaabtay Madaxweyne Maxmed C/llaahi Maxamed Farmaajo taas oo ku saabsan arrimaha u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Dowlada Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa shaki badan ka muujisay Jawaab celinta ka timid Dowlada Sucuudiga oo looga hadlay in ay waxwalbaa ay mari doonaan Sharciga iyo in ay u dhacayaan sidii loogu tala galay hadalkaas oo shaki badan dhaliyey.
Imaaraadka waxaa ay qeyb ka tahay Dagaalka uu sucuudiga hor kacayo ee lagula jiro Kooxda Xuutiyiinta yeman iyadoo Imaaraadka Saldhiga ay rabto in ay ka dhisato Beberana ay u adeegsan rabto in ay weerarad duqeymaha iyo midka badda ah uga qaado Dalka yeman halkaas.
· salaad on March 07 2017 · 0 Comments · 83927 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,909,104 unique visits